I-24 Best Lotus Tattoos Design Idea Kwabesilisa Nabesifazane - Tattoos Art Ideas
i-sonitattoo August 27, 2016
Kunezinhlobo ezahlukene zemidwebo ye-tattoo esetshenzisiwe njengembali ye-lotus. Ubuhle bale tattoo babuthanda abantu abaningi kuwo. Kuthambekele ukubamba amehlo. Uma ubona abantu bewunkiba emzimbeni wabo ufuna ukwazi ukukhuluma ngalokhu.
I-Lotus tattoo isho ukuthini
I-Lotus tattoos ingaba yinkimbinkimbi futhi imidwebo ye-tattoo enencazelo eye yabenza ibe yinto emangalisa kakhulu. Imibala ye-tattoo yikho enikeza i-#lotus tattoo izincazelo ezahlukene. I-lotus emhlophe ikhuluma ngengqondo nangokomoya. Ikhuluma ngokuphelela nokuhlanzeka.
I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka imelela ukulawula okungokomoya ngokwengqondo. Imelela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha kanye nolwazi. I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka ibonisa umbono wezinkolelo onkolo. I-lotus ebomvu ikhuluma ngoBuddha ngenkathi i-lotus ebomvu ikhuluma ngenhliziyo, ububele nokuvutha kufaka phakathi uthando.
Kunezinhlobo ezihlukahlukene zezithombe ongazisebenzisayo ekushintsheni indlela obukeka ngayo. Thatha isibonelo, izimpaphe eziza ngezimo nobukhulu obuhlukahlukene. Ayikho ingxenye yomzimba ukuthi ayihambisani nayo. Iyini incazelo ye-tattoo? Abantu abaningi banezincazelo ezihlukile kulo. I-Lotus #tattoo yi-symbolic yiyona isizathu esenza abantu bahambe kalula ngabo ikakhulukazi abangokwenkolo ababona okunencazelo eningi kule tattoo enhle. Kungadonsela izinhlanzi ze-koi ukuze kube nencazelo emangalisayo yothando, impumelelo, inhlanhla, ikhono lokumelana nezithiyo kanye nezingozi.
Njengoba kudalwa ipeni kagesi, ukuthola i-inked kuye kwaba ngokulinganayo okulula okuyizinto eziningi abantu abazozenza ngazo lezi tatto zezimbali ze-lotus. Abenzi bezandla, abaye bacela isicelo esikhulu, bafinyelele kubantu abano-inking abahlala ezindaweni ezisebusweni. nge
Kunoma yikuphi, ngemuva kwesikhathi esithile, ubuciko bokunweba umzimba buphinde buphumelele emhlabeni wonke, futhi kungavunyelwa ukuchaza ukuthi namuhla, i-4 kubantu baka-10 banezinhlobo ezithile zeyinki emzimbeni wabo. nge
I-Wrist Flower Tattoo
Lobuciko uphuthukile kuze kube sezingeni elihle kangaka, kuze kube yilapho abantu bengavumelani nama-inks ehlala njalo njengokwenziwa komzimba okungapheli okwakhiwe ngempela okuvulekele izindlela kubantu abangathandanga ukungena yonke isikhathi. nge
I-back tatto Flower tatus
Kusukela ngaleso sikhathi phambili, udumo lwama-inks luye lwahlaba umxhwele futhi luzobe lwenzeke isikhathi eside. nge
I-Arm Lotus Flower Tattoo
Abantu bathola izidakamizwa ngezizathu ezihlukahlukene. Kukhona abantu abahamba ngamathambo amaningi abonakalayo ukuze benze umqondo noma bahlalise izici zabo nezitayela zabo. nge
I-Leg Flower Tattoo
Uma kungenzeka ukuthi ungomunye walabo abathola ama-tattoos ngenxa yezizathu ezithile noma ngomunye umuntu oyingqayizivele nje, khona-ke uzodinga ukuthola indawo egcwele ukusiza izidingo zakho. nge
Ngokufanayo kuyodingeka ukuba ukhethe ukugcizelela ukubeka ithuba lokuthi kufanele uhlale kude naso jikelele labantu iso ngesikhathi esinikeziwe. nge
I-Lotus Flower ye-Back Back
Ngenhlanhla, kunezinhlobo eziningi zezimo ezenza kube lula kuwe ukuthola tattoo enenzuzo, noma kunjalo uhlale usifihliwe njengoba uthanda. nge
I-tattoo Flower Lotus
Kuyinto yokuma phakathi kwezifunda ezidume kakhulu futhi yenza indawo emangalisayo yamattoos amancane namagama. Ngokungangabazeki ungawugcina uhlanganiswe ngendwangu yesandla noma ubukele futhi ulungele. nge
Umdwebo we-legus flower we-legus
Kuphakathi kwezindawo ezincane ezihlukumezayo zokudweba umzimba futhi ungacabanga ukuthi njengoba kwenzeka lapho udinga ukugcina ibanga eliqhamuka ekuhlushwa kubuye kube nesikhathi esilula ukufihla umdwebo. nge
Ukuba nomdwebo onjengoba yilokho okungakunikeza ukuthi ukuphakamisa udinga ukwenza umehluko ngesitayela sakho. Kunabantu abaningi abahlale bezindla ngendlela yokubukeka ehlukile ngemidwebo yabo yokudweba. umthombo wesithombe
I-Belly Lotus Flower tattoo
Indlela elula yokungafani ne-tattoo kufanele ibe nenhle njengale. Ungathola lokhu kuphela uma uqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba nomdwebo ongavamile okhuluma okungaphezu kwalokho ongakwenza emphakathini. umthombo wesithombe
Emuva i-Lotus flower tattoo
Izindleko zokuthola i-tattoo akuzona ezibiza ngaphandle kokuthi ucabanga okuthile okungajwayelekile. Nge-#design efana nalokhu, ngeke usebenzise imali eningi. Konke okudingeka ukwenze ukuthola umculi omuhle futhi umsebenzi usuqedile. umthombo wesithombe
I-legus flower tattoo flower
Iyiphi into yokuqala okudingeka uyenze ngaphambi kokuba uthole i-tatus flower tattoo? Kufanele wazi uhlobo lwe-tattoo oyidingayo bese kufanele uqonde ukuthi yini i-tattoo ekhuluma ngayo. umthombo wesithombe
I-back lotus flower tattoo
Uma usuqedile ngalokhu, kufanele ubheke ochwepheshe ozokusiza ukufezekisa lelo fomu lobuciko. umthombo wesithombe
Lovely flower lotus flower tattoo
Kunezindawo eziningi ongathola usizo uma kuziwa ekukhetheni umculi we-tattoo. I-intanethi inezinhlobo eziningi zewebhusayithi ezikhethekile ekusebenzelaneni nezinhlobo ezahlukene zemidwebo. umthombo wesithombe
Uma ukwazi ukufunda ngalezi zamasayithi bese ubuza imibuzo ebucayi mayelana nomdwebo othize, kuzoba lula kuwe ukuthola tattoo yakho ye-tattoo flower. umthombo wesithombe
Ungakhohlwa ukuthi umdwebo ngamunye unomyalezo okhethekile ozama ukudlula. Uma usulungele ukungena tattoo, thatha isikhathi ekuqondeni ukuthi uzama ukuthini noma ugcine emzimbeni wakho njengempawu. umthombo wesithombe
Amanye ama-tattoos afana nalawo angunaphakade, kufanele uqaphele ngaphambi kokuba ugcine ukuchitha imali eningi ezama ukuyisusa. umthombo wesithombe
I-shoulder shoulder lotus tattoo
Chofoza lapha ukuze uthole olunye ulwazi lwe-Lotus Flower Tattoo yamantombazane
izibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezirose tattoosTattoos zeJomethrikhiI-Feather Tattookoi fish tattoodesign mehndiizithombe zezingonyamai-cherry ehlobisa i-tattooama-sun tattoostattoo engaphelitattoos eagleama-Tattoos amantombazaneumdwebo wezindlovui-scorpion tattooimibhangqwana emibhangqwanatattoos cutebird tattoosumdwebo we-watercolorizinyawo zamathamboumdwebo womcibisholoamathumbu esifubaimidwebo yamasleelotus flower tattooimibono ye-tattooizithombe zezinhlangaimisindo yezintamboangel tattoosabangani bomngane abangcono kakhuluidayimani tattooi-octopus tattooflower tattoosuthando izithombetattoos udadeama-tattoo amahangeama-tattoos engaloama-tattoo kubantutattoo isoumculo womdweboizithombe zezinyangatattoos zomqheleukubuyisa izithombeI-Heart Tattoosi-henna tattooama-cat tattoosngesandla izidakamizwaTattoos yama-Ankleamathrekhi we-butterflyi-compass tattooukudubula izithombeama-tattoo